Dowladda Norway oo deeq ay siin jirtey ka goosatay Masjidka Towfiiq ee lagu dirirsan yahay (Warbixin) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dowladda Norway oo deeq ay siin jirtey ka goosatay Masjidka Towfiiq ee...
Dowladda Norway oo deeq ay siin jirtey ka goosatay Masjidka Towfiiq ee lagu dirirsan yahay (Warbixin)
(Oslo) 19 Nof 2019 – Dowlada Norwey oo si ku meelgaar ah u hakisay dhaqaale ay ku taageeri jirtay Masjidka Tawfiiq oo uu maalmahaan ka jiray is qab qabsi dhanka maamulka ah.
Warbaahinta Wadanka Norwey oo markii hore sheeda sare ka eeganeysay waxyaabaha ka socda masjidka Towfiiq oo ay maamulaan Soomaalida ku nool dalkaan Norwey ayaa saakay bilaabay baahinta khilaafaafka ka dhex jira labo kooxood oo Soomaali ah oo isku heysta hab maamulka Masjidkaan.
Warbaahinta Dowlada ee NRK iyo Wargeyska VG oo ka mid ah wargeysyada ugu caansan ee madaxa banaan ee ka jira dalka Norwey ayaa saakay tabinaya in maamulka gobolka Oslo oo ah halka uu ka dhisanyahay masjidka ay go’aan ku gaareen in ay joojiyaan dhaqaale sanad weliba dowlada Norwey ay ku deeqi jirtay masjidka.
Norwey waxa ay dhaqaale siman sanad weliba ku bixisaa taageerida diimaha kala duwan ee ay aaminsanyihiin qoomiyadaha kala duwan ee ku nool dalkeeda, waxaana jira hab loo raaco qaadashada dhaqaalahaas oo ah in qofku uu iska diiwaan geliyo goobaha cibaadada ee uu ka tirsanyahay.
Masjidka Tawfiiq waxa ka diiwaan gashan muslimiin gaareysa 7,837 qof kuwaasi oo qofkiiba dowlada Norwey ay u xisaabiso in ay madaxiisa ku dhiibto lacag gaareysa 1000 karoon oo ah lacagta wadanka . Xiligaan la joogana u dhiganta doolar ahaan $ 115/120.
Sanadkaan 2019 waxaa la filayay in ay dowlada Norwey siiso masjidka lacag ku dhow 8 Milyan oo karoon taas oo la filayay in ay helaan maamulka masjidka bisha June ee soo socota.
Warbaahinta ayaa sabab uga dhigtay hakinta dhaqaalahaan khilaaf mudo soo jiray oo ka jira Masjidka Kaas oo salka ku haya maamulka masjidka.
Axadii lasoo dhaafay ayaa la filayay in doorasho cusub oo dhanka maamulka ah ay ka dhacdo masjidka balse buuq iyo is fahan daro ka dhex dhashay Soomaalida ayaa sababtay in ay ku soo baxaan ciidamada Booliska wadanka kuwaasi oo ugu dambeyn kala diray Soomaalidii Masjidka ku sugneyd.
Labada koox ee isku heysta maamulka masjidka ayaa doonaya in ay hab qabiil ku maamulaan masjidka taas oo ugu dambeyn keentay in ay is fahmi waayaan.
Dowlada Norwey ayaa arintaana ogaatay kadib markii labo gudi oo Soomaali ah oo midba uu sheeganayo in uu yahay maamulka masjidka ay waraaqo u geeyeen xafiiska Gudoomiyaha gobolka Oslo taas oo soo shaac bixisay khilaafka.
Aqoonyahanada iyo quburada ku xil dheer xalinta is qab qabsiga nuucaan ah ayaa ii sheegay in arintaana ay keeni karto in gabi ahaanba gacanta Soomaalida laga bixiyo maamulka ay hada isku heystaan ama gabi ahaanba la xiro masjidka.
Waxaa Diyaariyay: Max’ed Cabdi Naxar
Previous articleDAAWO: ”Soomaalidu cid kasta waa ka HAYBAYSATAA marka hoggaan ay iyadu leedahay laga reebo!” – Talo CULUS oo la siiyay!
Next articleDhegaha xarig la’aanta ah ee Apple AirPods oo la xaqiijiyay inay sababaan cudurka halista ah ee KANSARKA ah (Daraasad cusub)